अर्जुन पोखरेल नेपाली संगितीक क्षेत्रमा चिनाई रहनु पर्ने नाम भने होइर्न । ०५८ बाट औपचारीक रुपमा सांगीतिक यात्रासुरु गरेका अर्जुन अहिलेका ब्यस्त सगीतकार मध्यका एक हुन् । आधुनी ,लोक होस् या चलचित्रका । उनका संगीत रहेको प्राय गतिसंगीतले सांगीतिक बजार तताएका छन् । त्यसैले हो अचेल आयोजना हुने बिभीन्न अवार्ड समारोहमा पनि उत्कृष्ठ संगीतकारको अवार्ड उनि आफैले फुत्काउने गर्दछन् । चलचित्र दिलमायाको छुट्छकी साथबाट चलचित्र संगीत सुरु गरेका पोखरलेको संगीत रहेको बिन्दासको बाटो मोडेर.. , रिमझिम रिमझिम .., मेरो जिवनसाथीको सरर बेनीको... , बिन्दास २ को सुन्छु तिमीले मलाई.... , जिगलोको बल्दै आगो ...,आधी चलेर .., मेन्टरलको कजल भएर बस्छु .... लगातका कयौ गीत चर्चामा छन् । प्रस्तुत छ यीनै संगीतकार अर्जुन पोखरेल संग बिकास लामीछाने ले गर्नु भयको कुराकानीको केही अंग
१ कतीको ब्यस्तता छ ?
अहिले साथमा दुई तिनवटा चलचित्र छन् । नामै लिनु पर्दा सत्यदिप ,कैफियत ,युवराज आदी । चलचित्रको अलवा बिभीन्न गितका एल्बमहरुमा पनि ब्यस्त छु ।
२ संगीतिक क्षेत्रमा लामै समय संघर्ष गर्नु भयो होला नी ?
म ०५८ सालबाट यसैमा छु । तर ब्यवसाहिक रुपमा सांगीतिक क्षेत्रमा लागेको चाहि ६७ बाट मात्र हो । संगीतमै लाग्नुको कारण पनि त होला नी ? संगीत मेरो बच्चै देखिको रुचिको बिषय हो । तर यसमा लाग्दै गए पछिको सफलताले मलाई संगीतकार बन्न हौस्यायो ।
३ संगीतमा कसरी छिर्नु भयो ?
पहिलो पटक एकउटा गीत गायको थिए । सो गीतले ठिकठिकै चर्चा दिलायो । त्यसपछि संगीतमा छिरे ।
४ अहिलेसम्म तपाइको संगीत कति गीतले पाएका छन् ?
त्यस्तै २०० भन्दा माथीका गीतमा संगीत भरेको छु । ति मध्य तिस प्रतिसत जति गीतमात्र बजारमा आएका छन् ।
५ संगीतकारका रुपमा चिनिदाको अनुभव ?
निकै खुसी लाग्दो रहेछ । अझ जिम्बेवारी थपिएको महसुस भएको छ । यो क्षेत्रमा मैले गर्नु पर्ने काम धेरै देखेकी छु । तिनका लागी म संघर्षरत छु ।
६ यहाँसंम्म आइ पुगदा संगीतलाई कसरी बुझ्नु भएको छ ?
हरेक मानिसको बिचारमा संगीतको परिभाष फरक फरक हुन सक्छ । बुझाई आ आफ्ने हुन्छ । यो एउटा कला हो । जसमा स्वर लय मिलाएर मनोभावना पोख्ने गरिन्छ ।
७ संगीतामा लाग्ने प्रेरणा कसैबाट मिेको छ की ?
आमा बुबानै मेरो प्ररणको श्रोत हुन् । उहाहरुलाईने म मान्दछु । केही बाल्यकाल पनि हो । त्यतिबेला सुनेका गीतहरुले संगीतमा लाग्न मलाई बाटो देखायो ।
८ संगीतमा नलागेको भए नि के गर्नु हुन्थ्यो ?
यसमा नभएको भए सायद म टीचर हुन्थे होला ।
९ तपाइलाई संगीत श्रृजना गर्न कस्तो पगीतमा आनन्द लाग्छ ?
म अलराउन्डर संगीतकार भनेर चिनीन चहान्छु । त्यसैले पनि प्राय सबै प्रकारका गीतमा संगीत भरेको छु ।
१० प्रेम परेको छ की छैन ?
अहिले छैन पहिले थियो ।
११ पहिलो प्रमको अनुभब सुनाउनु न ?
आठ कक्षामा पढ्दा साथीको लहलहैमा लागेर गरेको थिए ।अहिले भुलि सके । अहिले प्रेमीकाको चहना छ की छैन ।
१२ कस्तो हो तपाइको रोजाई ?
मेरो घर सम्महाल्न सक्ने । कामलाई सम्मान गर्ने र असल नारी प्रेमीको कल्पना छ मेरो मनमा ।
१३ बिहे कहिले गर्ने त ?
जन्म ,मृत्यु र बिबाह मानिसको हातमा हुदैन । यो पहिले निर्धारित हुन्छ । समय आएपछि होला नी ।
१४ संगीतमा लागेर के पाउनु भयो के गुमाउनु भयो ?
सबै भन्दा पहिले नाम ,दाम र काम पाए । त्यसपछि भन्नु पर्दा आत्मासस्टुष्टी ।
- See more at: http://www.nepalirajatpat.com/interview/%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%97%e0%a5%80%e0%a4%a4%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%b0-%e0%a4%b0-%e0%a4%b2%e0%a4%af-%e0%a4%ae%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%8f%e0%a4%b0-%e0%a4%ae/#sthash.auo54nl7.dpuf